Wararka Maanta: Axad, May 27, 2012-Afhayeenka AMISOM oo sheegay in Qabsashada Afgooye ay yareynayso Weerarradii Al-shabaab ay Muqdisho kusoo qaadi jireen
Col. Ankunda wuxuu sheegay in degmada Afgooye ay ahayd meesha labaad ee ay Al-shabaab ka abaabuli jireen weerarrada ay ka geysanayaan Soomaaliya marka laga reebo degmada Kismaayo oo uu sheegay inay tahay goobta ugu weyn ee laga abaabulo weerarrada Al-shabaab.
"In ciidamadeennu ay Afgooye gaaraan muhimi ayay ahayd waayo waxay ahayd goob laga soo abaabuli jiray weerarrada Muqdisho lagu soo qaado, balse wixii hadda ka dambeeya taasi ma jiri doonto," ayuu yiri afhayeenka AMISOM.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu sheegay in ciidamadooda ay mareen dhul howd ah markii ay qabsanayeen degmada Afgooye ujeedadeuna ay ahayd sidii loo badbaadin lahaa dadka shacabka ah ee ku nool inta u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isgarabsanaya ayaa waxay gudaha u galeen degmada Afgooye duhurnimadii Jimcaha, kaddib dagaal saddex maalmood ka socday inta u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye, iyadoo degmadan ay noqonayso tii ugu horreysay ee ka baxsan Muqdisho oo Al-shabaab laga qabsado.
Kumannaan dad ah oo ku noolaa inta u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa uga soo barakacay halkaas dagaalladii dhexmarayay ciidamada hardamaya, iyadoo ay jiraan dad ay waxyeello dhimasho iyo dhaawac ah kasoo gaareen dagaalladaas.
Ugu dambeyn, saraakiisha dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa si aad ah u soo dhaweeyay la wareegidda degmada Afgooye iyagoo ku tilmaamay mid dhabar-jab ku ah Al-shabaab.